The Rohingya News Bank : FFM
Showing posts with label FFM. Show all posts
FFM အစီရင်ခံစာနှင့် နိုင်ငံရေးအလားအလာ ( တင်္နဂနွေ စကားဝိုင်း )
၂ဝ၁၉ သြဂုတ် ၁၀ ရက်နေ့ RFA စကားဝိုင်း အစီအစဉ်မှာ " FFM အစီရင်ခံစာနှင့် နိုင်ငံရေးအလားအလာ " ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပင်တိုင်ပါဝင်ဆွေးနွေးမယ့်သူတွေကတော့ ဦးလှမောင် (စီးပွားရေးပညာရှင်)၊ ဦးသိန်းထွန်းဦး (သေနင်္ဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့)၊ ဟာဂျီ ဦးအေးလွင် (ကိုဖီအာနန် အကြံပေးကော်မရှင်)နဲ့ ဦးရဲထွဋ် (ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Labels: 2019, FFM, mm, Video, စကားဝိုင်း, သတင်း
ရခိုင်မြောက်ပိုင်းအရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်လို့ ခုံရုံး ဖွဲ့တာလို့ တပ်မတော်ပြော
တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ၂၀၁၉၊ မတ် ၂၅ ရက်နေ့က နေပြည်တော် တပ်မတော် စစ်သမိုင်းပြတိုက်မှာ ကျင်းပစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်- မောင်တောဒေသတွေမှာ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ARSA အဖွဲ့ရဲ့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေနောက်ပိုင်း နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေက စွပ်စွဲလာတဲ့ လူ့အခွင့် အရေး ချိုးဖောက်မူတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ တပ်မတော်က ခုံရုံး ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဟာ လိုအပ်လို့ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်လို့ ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာက စွပ်စွဲပြောဆိုတာတွေကို လျော့နည်းအောင် လုပ်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းထွန်းညီက RFA ကို ဒီနေ့ ပြော ပါတယ်။
Labels: 2019, AA, AI, Amnesty International, ARSA, FFM, mm, တပ်မတော်, ဘူးသီးတောင်, ရခိုင်, မောင်တော
Fact-Finding Mission (FFM). In September 2018, the FFM Report
Labels: 2018, en, FFM, Report